कम्युनिस्ट र कांग्रेसले भ्रम छरे, अब देश हामी बनाउँछौं : बाबुराम
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट र कांग्रेसले भ्रम मात्रै छरेको आरोप लगाएका छन् । उनले कम्युनिस्ट, कांग्रेसजस्ता पुराना शक्तिसँग देशलाई गति दिने ल्याकत नभएको टिप्पणी गर्दै नयाँ शक्तिले देशमा समृद्धिको उज्यालो ल्याउने वाचा गरे ।
बुद्धजयन्ती/चण्डी पुर्णिमा, उभौली पर्वको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले नयाँ शक्तिलाई दीपको संज्ञा दिए ।
‘नेपाली जनतालाई समृद्धि दिने वाचा हिजो हामीले गरेका थियौं’, भट्टराईले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘हामी आफ्नो प्रतिबद्धताबाट विचलित भएका छैनौं । पूरा गरेरै छाड्छौं ।’नयाँ शक्ति पार्टी कमजोर बनेको भन्ने कतिपयको विश्लेषणप्रति लक्षित गर्दै भट्टराईले आफ्नो पार्टीलाई दीपको संज्ञा दिए । ‘पार्टीका प्रत्येक अभियन्ता आफैंमा बलेका एक दियो हुन्’, भट्टराईले शुभकामना सन्देशमा थपेका छन्, ‘हजारौं नयाँ दीपहरु जलाउने छाँै ।’
भट्टराईले पच्चीस सय वर्ष पहिले जन्मेका सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरेर संसारलाई ज्ञानको ज्योति दिनसकेको तथ्यबाट प्रेरणा लिएर सर्वतोमुखी समृद्धि, शान्ति र सुखको नयाँ सन्देश दिने संकल्प गर्न सबैमा आग्रहसमेत गरेका छन् ।
भट्टराईले बुद्धवाणीको स्मरण गर्दै देशको समस्या ‘५ स’ को माध्यमबाट पूरा गर्न सकिने कथन भट्टराईको छ । ‘देशमा समस्या छ । समस्याको कारण छ । समस्याको निवारण छ ५ स को मार्गबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । यो महान शक्ति हासिल गर्न हामी नयाँ शक्ति पार्टी,नेपालका सम्पुर्ण अभियन्ताहरु
यस्ता छन् भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले गरेका प्रतिबद्धताहरुः
१. नेपाली जनताको सुख,समृद्धि र खुसीबाहेक हाम्रो अर्काे कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन । राजनीति हाम्रो लागि मानवताको सेवा गर्ने माध्यम हो, पेशा व्यवसाय हैन । सत्ता,शक्ति,पैसा,पद र ब्यक्तिगत प्रतिष्ठाको छुद्र स्वार्थपुर्तिको माध्यम राजनीतिलाई कहिल्यै बनाउने छैनौं ।
२. नयाँ शक्क्ति पार्टीका स्थापनाकालीन उद्देश्यहरु हामी कहिल्यै भुल्ने छैनौं । स्वाधीन, समावेशी,सुशासित, समृद्धि र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य नै हाम्रो राजनीतिक जीवनको मुख्य लक्ष्य हुनेछ ।
३. नेपाल समृद्धीकरण को नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ शक्ति पार्टी,नेपाल समृद्धीकरणको नयाँ चरणको नेतृत्व गर्न बनेको पार्टी हो । नयाँ युगको नयाँ आवश्यकतालाई पूरा गर्न हामी आफंै (नव मानव) बन्ने छौं । हाम्रो पार्टी नयाँ युगको नेतृत्व गर्न, नयाँ सोच, शैली,ढाँचाको पार्टी हुनेछ । यस्तो पार्टी निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै त्याग, योगदान र वलिदान गर्न सदैव तत्पर रहनेछौं ।
४. हामी न कहिल्यै भष्टाचार गर्नेछौं ( न अरु कसैले गरेको भष्टाचार सहने छौं । हाम्रो सार्वजनिक पार्टीगत तथा व्यक्क्तिगत जीवन सधैं स्वच्छ, सदाचारयुक्क्त नैतिक र पारदर्र्शी हुनेछ । गौतम बुद्धको (सम्यक जीविका) उपदेशले हामीलाई सधंै अनुप्रेरित गर्नेछ । हामी सधैं उद्यमशील बन्ने प्रयत्न गर्नेछौं।
५. हाम्रो दृढ विश्वास छ कि पँुजीवाद कि साम्यवाद भन्ने बीसौं शताब्दीको वैचारिक धुर्वीकरणको चरण अन्त्य भैसकेको छ । समावेशी तथा सहभागितामुलक लोकतन्त्र र समुन्नत समाजवादमा अधारित तेस्रो वैचारिक (राजनीतिक ध्रुवको निर्माण नै यतिखेरको । सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प हो । तसर्थ हामी कांग्रेस वा कम्युनिष्ट नामधारी परम्परावादी दलहरुले छर्ने कुनै भ्रममा पर्ने छैनौं । नयाँ युगको आवश्यकता पुराना शक्तिहरुबाट पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी दृढ छाँै । ती दुवै धारभन्दा अग्रगामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैँनौ ।